Xildhibaanada dhalinyarada ah oo xalay Muqdisho kula kulmay dhalinyaro – Kalfadhi
Xildhibaanada dhalinyarada ah oo xalay Muqdisho kula kulmay dhalinyaro
Xildhibaanada da’da yar ee ku jira Golaha Shacabka ayaa xalay ka balan qaaday dhalinyarada Soomaaliyeed iney danahooda si fiican ugu matali doonaan Golaha Shacabka. Sida lagu daabacay barta Feysbuugga ee Golaha, waxay xildhibaanada dhalinyarada ahi u sheegeen dhalintii ay la kulmeen Muqdisho iney ka shaqeyn doonaan sidii ay fursado shaqo ugu abuuri lahaayeen dhalinyarada.
Arrintan ayey xildhibaanadu sheegeen kadib markii dhalinyaradii ay la kulmeen xalay ay ka heleen warbixin muujineysay sida ay da’ yartu ugu baahan tahay in looga faa’iideeyo fursadaha uga banaan dowladnimada Soomaaliya.
“In xildhibaanada dhalinyarada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka JFS ay soo hor fariistaan dhalinyarada ay metelaan waa farxad iyo guul lagu faano, waana soo dhaweyneynaa” ayay tiri Muna Axlaa oo ka mid ahayd dhalinyaradii kulanka ka qeyb gashay, sida uu Golaha Shacabku baahiyey.
Kulanka, oo xildhibaanada iyo dhalinyaradaba ku wada casheeyeen, waxaa muhiimaddiisa lagu sheegay inuu ahaa xoojinta doorka dhalinyarada ee Dowladnimada Soomaaliya. Hase ahaatee, arrinta la xiriirta shaqa u abuuridda dhalinyarada, ee ay Xildhibaanadii kulankaas ka dhawaajiyeen, ayaa imaaneysa iyada oo uu Sabtidii Xildhibaan Cabdirashiid Xidig ka hor yiri Kulankii Golaha Shacabka “dadka Soomaaliyeed shaqo la’aan ayey u dhimanayaan”.